Home Wararka In uu is Casilo Farmaajo “Waa xalka kaliya ee Somalia ku badbaadi...
In uu is Casilo Farmaajo “Waa xalka kaliya ee Somalia ku badbaadi karto”
Dr. Mahamud Mohamed Ulusow
Reading Time: 3 minutesSoomaaliya waxaa dal sanooyin badan ku jira burbur dowladnimo iyo dagaal sokeeye oo keenay shacab kala tagay, u kala irdhoobay dhinacyo badan. Waxaa muddo socday dadaal aad gaabis u ahaa ee dib u heshiisin, nabadeyn, iyo dib u dhis dowlad heshiis lagu yahay.
Barlamaan iyo Madaxweyne uu dhammaaday muddo xileedkooda 4 sano ma ahan barlamaan iyo Madaxweyne, waayo dastuurka ma oggola, miisaaniyadda dowladda ma ansixi karo. Haddii sharcidarradaan meelmarto maanta, waxaan shaki ku jirin inay sharci noqon doonto in suuqa dhexdiisa lagu toogto muwaadin Soomaaliyeed, la boobo hantida dadweynaha, la xado canshuurta iyo kaalmada caalamka, lana yiraahdo waa bannaan tahay madaama Madaxweynaha iyo Barlamaanka ama Xukuumadda aan sharciga aheyn ayaa sidaas yiri ama oggolaaday.
Madaxweynaha iyo Barlamaanka ma beddeli karaan qodobbada dastuurka qaarkood gaar ahaan kuwa ku saabsan mabaadi’da iyo kuwa ayaga khuseeya sida muddo xileedka. Kordhinta muddo xileedka waa arrin dan u ah Madaxweynaha iyo Barlamaanka, mana kororsan karaan ( conflict of interest =daneysi). Dalalka qaarkood, waxaa la mamnuucay in Xildhibannada Barlamaanka kororsadaan mushaarka, loona xilsaaray Guddi gaar ah. Sidaa darted, waa xaaraan in dastuurka loo beddelo danta Barlamaanka oo ka baaqsaday gudashada xilkiisa dastuuriga ah. Waxaa ku ah Dowladda waajib lama dhaafan ah inay qabato doorasho barlamaan ka hor dhammaadka muddo xileedka hadba qaabka heshiiska lagu yahay. Haysashada xukunka doorasho la’aan waa sharcidarro, waa burburka dowladnimada. Xildhibannada Barlamaanka 10 xaq uma laha in mushaar iyo gunno la siiyo bisha jannaayo 2021.
Shacabka Muqdisho waa inay u diyaargaroobaan ikhyaaraadka iyo halista soo socota. Daaraha iyo mustaqbal ma jirayaan haddii aysan jirin dowlad u hogaansan dastuurka iyo sharciga, dhegahana aan ka fureysan baaqyada gudaha iyo caalamka. Naf iyo maal ayaa loo huray kasbashada gobannimada qofka iyo shacabka Soomaaliyeed, waana in naf iyo maal lagu ilaaliya, lagu waraabiyo jiritaanka xorriyada, gobannimada, iyo dowladda u hoggaansan sarreynta sharciga. Ku tumashada dastuurka iyo ku takrifalka awoodda dawladda waxay halis ku yihiin daaraha iyo mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed kuwa maanta nool iyo kuwa dhalan doona.
google Dr. Mohamud M. Ulusow
Disclaimer: The opinions expressed in this article are the author’s own. Muqdisho Online does not endorse nor support views, opinions or conclusions drawn in this post and we are not responsible or liable for any content, accuracy or quality within the article or for any damage or loss to be caused by and in connection to it.
Dr. Mahamud Mohamed Ulusow - June 19, 2021
Dr. Mahamud Mohamed Ulusow - June 18, 2021